Ukusetshenziswa kwePolyelectrolyte kuMakhiqizi Wamanzi Amanzi AseManzini nabaphakeli | Oubo
Umkhakha Wokulashwa Ngamanzi
Umtfumbu nePhepha Imboni
I-whatsapp: +86 13356391894
Ukusetshenziswa kwePolyelectrolyte kuManzi Amanzi Angcolile
Ukuphathwa kwendle kukamasipala ngokuvamile kubhekisa ezitshalweni zokuhlanza indle zikamasipala, izikhungo zokucocwa kwendle zezikhungo ezinkulu zikahulumeni, izikhungo zokucocwa kwendle zezikhungo zomphakathi, ukuphathwa kwendle emfuleni, nezindawo zokuhlanza indle zikamasipala zine-COD ephezulu futhi kunzima kakhulu ukuselapha. Izinqubo zokuphathwa kwendle zikamasipala zifaka: Ukuhleleka kwethangi, ithangi le-sedimentation, ithangi le-grit, ithangi lesibili le-sedimentation, ithangi lamakhemikhali, ithangi lokuqina lendle, umshini wokuhlunga odonsa amanzi, njll.
I-Polyelectrolyte yokwelashwa kwendle kamasipala iyinto ebaluleke kakhulu. I-Polyelectrolyte isetshenziselwa ithangi le-sedimentation ukusheshisa ukuthambeka kanye nokuqina kwensimbi yokuqina okumisiwe; I-cationic Polyelectrolyte ijwayele ukusetshenziselwa ukukhipha udaka ngamanzi. Izici ze-flocculant yokuphathwa kwendle kamasipala:
1. Konga kakhulu ukusebenzisa i-Polyelectrolyte. Lapho isilinganiso sincane, ungathola umphumela omuhle wokwelashwa kwendle.
2. Kungathuthukisa ngokuphawulekayo ukusebenza kahle kokukhiqiza futhi kwandise okuqukethwe okuqinile kwekhekhe lodaka.
3. I-Polyelectrolyte kulula ukuncibilika emanzini.
4. Ekuhlukanisweni okuqinile oketshezi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ukubanjwa kwezinto eziqinile kungathuthukiswa.
5. Ngokusebenza kahle ngaphakathi kobubanzi be-pH ne-ph value.
Imishini yokuhlunga yokususa amanzi yasePolyelectrolyte sludge ikakhulukazi imishini yokuhlunga ibhande. Ngokuvamile, okuqukethwe kwe-cationic Polyelectrolyte ephakathi nendawo ephezulu kukhethiwe; isisindo samangqamuzana siyizigidi eziyi-9 -12 million, ukumiswa kwesilinganiso kungu-1-2%, kanti umthamo wethani lodaka olomile ngu-5- 7kg.
Isikhathi Iposi: Apr-07-2021
805Room, No.13, B Zone, uWanda Mansion, Qingdao, Isifundazwe Shandong
Indima ye-flocculant ekwelashweni kwendle
Imininingwane yokusetshenziswa kwe-polyacrylamide ku-t ...
Ukusetshenziswa kwePolyelectrolyte eMu ...
Ukusetshenziswa kwePolyacrylamide ezimayini
Ungalubona kanjani uhlobo lwe-ion lwe-polyacryl ...
© Copyright 2011-2020 Oubo Chemical Wonke Amalungelo Agodliwe.